Tue, May 26, 2020 at 7:42pm
काठमाडौं। भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्माविरुद्ध नेपाली महिलालाई अपमान गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। अल अरुणाञ्चल प्रदेश गोर्खा युथ वेलफेयर एसोसिएसनले मानव अधिकार आयोग र अरुणाञ्चल प्रहरीमा मुद्दा दायर गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। अनुष्का निर्मात्री रहेको ‘पाताल लोक’ नामको सिरियलमा एक महिलालाई गाली गर्नका लागि तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गरिएको थियो। नेपाल तथा भारतमा रहेका नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् अनुष्कालाई भिडिओबाट..
काठमाण्डाै, २६ फागुन बलिउडका चर्चित अभिनेता टाइगर श्रोफ, रितेश देशमुख तथा नायिका श्रद्धा कपूर अभिनित चलचित्र ‘बागी–३’ प्रदर्शनमा आएको तीन दिन पूरा भएको छ । प्रदर्शनमा आएको तीन दिनमा यस चलचित्रले बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार गरेको छ । यस चलचित्रले तीन दिनमा ६० करोड भारतीय रुपैयाँ कमाएको छ । टाइगर श्रोफको यस चलचित्रमा निकै नै क्रेज देखिएको छ । आइतवारसम्म पनि यस चलचित्रले निकै..
काठमाडौँ, १२ फागुन आज भन्दा करिब १७ वर्ष पहिला रिलिज भएको राम गोपाल वर्माको भुत भारतीय चलचित्र रजतपटको अविस्मरणीय चलचित्रमा पर्दछ । त्यसैले वर्षौ पछि धर्मा जस्तो ठुलो प्रोडक्शन हाउस र विकी कौशल जस्तो कुशल कलाकरसंग उस्तै शिर्षकमा “भुत” लिएर दर्शक सामु आएका छन् । जसले गर्दा दर्शकलाई सामान्य रुपमा नयाँ अनुभव हुने आशा हुन्छ तर पहिलो पटक निर्देशक बनेका भानु प्रताप..
काठमाडौँ, १० फागुन शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’ले रिलिजको पहिलो दिन नै १ करोड १२ लाखको व्यापार गरेको छ । निर्माण पक्षले दिएको जानकारी अनुसार चलचित्रले भ्याली भित्र ५९ लाख र मोफसलबाट ५३ लाखको व्यापार गरेको छ । शुक्रबार निर्माण पक्ष काठमाडौंको विभिन्न हलमा पुगेको थियो । जहाँ दर्शकको उपस्थिती बाक्लो देखिन्थ्यो । शनिबार पनि चलचित्रले राम्रो दर्शक पाएको छ ।..
काठमाडौं, माघ २७ दक्षिण कोरियाली चलचित्र ‘प्यारासाइट’ले अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अवार्ड ओस्कार जितेर इतिहास रचेको छ। हलिउडका चर्चित अभिनेता ब्राड पिटले पहिलो ओस्कार अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। ५६ वर्षको उमेरमा ब्राड पिटले ‘वन्स अपन अ टाइम इन हलिउड’मा गरेको अभिनय बापत् ‘बेस्ट सपोर्टिङ एक्टर’को अवार्ड पाएका हुन्। ‘वन्स अपन अ टाइम इन हलिउड’बाट उत्कृष्ट सहयोगी कलाकारको ओस्कार पाउँदा यसै..
काठमाडौं, २५ माघ आश गरिएको बलिउड चलचित्र ‘मलंग’को पहिलो दिनको व्यापार निकै कमजोर देखिएको छ । रिलिजको पहिलो दिन अर्थात् शुक्रबार चलचित्रले जम्मा ६ करोड ७५ लाख कमाएको छ । आदित्य रोय कपुर र दिशा पटनीको मुख्य भूमिका रहेको यस चलचित्रलाई प्रतिक्षित चलचित्रको रुपमा हेरिएको थियो । तर, पहिलो दिन भने चलचित्रको व्यापार अस्वभाविक कमजोर रहृयो । समीक्षात्मक रुपमा पनि चलचित्र उत्कृष्ट सावित..
काठमाडौं, २१ पुस बलिउडको प्रतिक्षित चलचित्र ‘बाघी ३’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । बिहिबार सार्वजनिक गरिएको ट्रेलरमा चलचित्रका मुख्य कलाकार टाइगर श्राफ, श्रद्धा कपुर र रीतेश देशमुखलाई फिचर गरिएको छ । टाइगर श्राफ हावी बनेको ट्रेलरमा चलचित्रको एक्सन पक्षलाई बढि स्थान दिइएको छ । ट्रेलरमा राखिएको एक्सनका दृष्यहरु धमकेदार छन् । चलचित्रको लागि टाइगरको मेहनत र द्वन्द्व निर्देशकको प्रशंसनिय छ । ट्रेलरमा टाइगर..
मुम्बई, २१ माघ । बलिउड अभिनेता रणवीर कपुर र आलिया भट्टको नयाँ चलचित्र ब्रह्माश्त्र’ प्रदर्शनमा आउने भएको छ । आयान मुखर्जीको लेखन तथा निर्देशन रहेको बलिउड फिल्म ‘ब्रह्माश्त्र’ पाँच भाषामा प्रदर्शनमा आउने भएको हो । स्टार अभिनेता अमिताभ बच्चन, रणवीर कपुर र आलिया भट्टको अभिनय रहेको उक्त फिल्म ५ भाषामा प्रदर्शनमा आउने भारतीय सञ्चारमाध्यममा उल्लेख छ । फिल्म आउँदो डिसेम्बर ४ बाट प्रदर्शनमा..
काठमाडौं, २० माघ । नेपाली फिल्म ‘बुलबुल’ले पब्लिक च्वाइस अवार्ड जितेको छ । फ्रान्समा जारी दक्षिण एसियाली फिल्म फेस्टिभलमा ‘बुलबुल’ले पब्लिक च्वाइस अवार्ड जितेको हो । फ्रान्समा जारी दक्षिण एसियाली फिल्म फेस्टिभलमा नेपाली फिल्म ‘बुलबुल’ ले पब्लिक च्वाइस अवार्ड जितेको छ । निर्देशक विनोद पौडेलले फेसबूकमार्फत अवार्ड जितेको जानकारी गराउँदै खुशी शेयर गरेका छन् । अवार्ड समारोहमा सहभागी हुन निर्देशक पौडेल र..
मुम्बई, १४ माघ । बलिउडका चर्चित अभिनेता आमिर खान र खेलाडीका नामले चिनिने अक्षय कुमारको फिल्म रिलिज हुने क्रममा छन् । दुबैको फिल्म रिलिजको डेट जुध्न गएपछि आमिर खानका लागि अक्षय कुमारले आफ्नो रिलिज मिती सारेका छन् । यो क्रिसमसमा आमिर खानको फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ रिलिज हुँदैछ । क्रिसमसको अवसरमा रिलिज हुने यो फिल्मले बक्स अफिसमा उत्साहजनक व्यापार गर्ने आँकलन..
मुम्बई, १४ माघ । बलिउडका चर्चित अभिनेता सलमान खानका प्रत्ययेक फिल्मल एक सय करोडभन्दा बढी कमाउने गरेका छन् । पछिल्ला दशक उनका हरेक फिल्मले सय करोड क्लबमा प्रवेश पाएका छन् । सलमान बलिउडमा सबैभन्दा बढी कमाउने अभिनेतामा पनि पर्छन् । तर, उनले पनि कसैको उधारो तिरेका छैनन् भन्दा तपाईँलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । हो, वर्षमा अर्ब रुपैयाँ कमाउने सलमानले पनि कसैलाई उधारो..
काठमाडौं, ७ माघ । पूर्व मिस नेपाल निकिता चाण्डकले चलचित्र साङ्लोबाट नेपाली फिल्म नगरीमा कदम राखेकी छिन् । उनको डेब्यु फिल्म ‘साङ्लो’ यही २४ गतेबाट प्रदर्शन हुने भएपछि चाण्डक पछिल्लो समय मिडियामा छाएकी छिन् । फिल्ममा विराज भट्ट र निकिता चाण्डकको शीर्ष भूमिका देख्न सकिनेछ । फिल्मको रिलिज मिति नजिकिँदै गर्दा यसको प्रचारमा पनि कलाकार लागिपरेका छन् । प्रचारका क्रममा विराज र..
काठमाडौँ, ३ माघ फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत यो साता नेपाली फिल्म ‘१२ सत्ताइस’ प्रदर्शनमा आएको छ । त्यस्तै बलिउड तर्फ फिल्म ‘जय मम्मी दी’ र हलिउडतर्फ थ्रडी फिल्म ‘डु लिटल’ प्रदर्शनमा आएको छ। कमेडी जनारामा निर्माण भएको फिल्म ‘१२ सत्ताइस’लाई जोन योञ्जनले निर्देशन गरेका हुन्। फिल्ममा निर्देशक योञ्जनकै कथा रहेको छ । फिल्ममा समीर श्रेष्ठ, अभिषेक नेपाल, काजी राना, अस्मिता लामिछाने, सम्रान्त थापा..
मुम्बई, २७ पुस । दिल्ली उच्च न्यायालयले दीपिका पादुकोणको फिल्म 'छपक' प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ। वकिल अपर्णा भट्टलाई क्रेडिट नदिएको भन्दै प्रदर्शनमा रोक लगाएको हो। अदालतको आदेश अनुसार फिल्म जनवरी १५ देखि मल्टिप्लेक्स, अनलाइन प्लेटफर्म र जनवरी १७ देखि कुनै पनि ठाउँमा रिलीज हुन सक्ने छैन। यसअघि पटियाला हाउस अदालतले पनि निर्माणकर्तालाई वकिलहरुलाई क्रेडिट दिन आदेश दिएको थियो। फिल्म निर्माण कम्पनी फक्स स्टुडियोले ट्रायल..
मुम्बई, २६ पुस । बलिउडका चर्चित अभिनेता आयुष्मान खुरानाले निर्देशक इम्तियाज अलीको फिल्म रिजेक्ट गरेका छन् । भारतिय मिडिया रिपोर्ट अनुसार इम्तियाजले अमर सिंहको भूमिकाका लागि आयुष्मान खुरानासँग सम्पर्क गरेका थिए । तर आयुष्मानले उनको अफर रिजेक्ट गरेका हुन् । एक महिना पहिले नै इम्तियाजले स्क्रिप्ट लिएर आयुष्मानलाई सम्पर्क गरेका थिए । तर, आयुष्मान आफ्ना आगामी फिल्महरु गुलाबो सीताबो र शुभ मंगल..
काठमाडौं, २३ पुस । बलिउड चर्चित अभिनेता अजय देवगनको फिल्म तन्हाजी चाडै रिलिज हुने भएको छ । १५० करोड लगानीमा निर्माण भएको यस फिल्म रिलिज पुर्व नै १ सय ३७ करोड कमाउन सफल भएको छ । यस फिल्मको कुल लागत १३० करोड रहेको र २० करोड प्रचारमा खर्च भएका कारण पनि बजेट ठुलो भएको अजय देवगनले बताएका थिए । तर, स्याटलाइट..
मुम्बई, १० पुस वर्ष २०१९ मा पनि बलिउडमा कयौँ ठूला फिल्म रिलिज भए । कमाइका हिसावले ती फिल्म मध्ये केहीले नयाँ रेकर्ड समेत कायम गरेका छन् । वर्ष २०१९ मा बलिउडका पाँच ब्लकबस्टर फिल्म यहाँ चर्चा गरिएको छ । भारतः सलमान खान र कट्रिना कैफ अभिनित भारतले आम्दानीको सवालमा २०० करोड छुन सकेन । तर पनि यो फिल्म बर्षको सबैभन्दा बढी कमाइ फिल्मको..
मुम्बई, मंसिर २५ । बलिउड अभिनेता सलमान खानको फिल्म ‘दबंग ३’ फिल्मको रिलिजअघि सनातन हिन्दुवादी संस्थाले बहिष्कारको घोषणा गरेको छ। हिन्दू जनजागृति समिति र बजरंग दलका अनुसार यस फिल्ममा साधुसन्तलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ। उनीहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै फिल्मको विरोधमा उत्रिएका थिए । ‘दबंग ३’ फिल्मको सुटिङको क्रममा यसलाई लिएर आन्दोलन भएको थियो । फिल्मको एउटा गीतमा साधुलाई गिटार..
काठमाडौँ, २३ मङ्सिर नेपाली हाँस्यक्षेत्रका मात्रै होइन नेपाल चलचित्र उद्योगका सफल व्यक्ति हुन्, दीपकराज गिरी । निर्माता, कलाकार दीपकराज गिरीले नेपाली चलचित्रमा पछिल्लो समय आएको सङ्कटलाई व्यङ्ग्य गरेका छन् । गिरीले सामाजिक संजालमा एक स्ट्याटस लेख्दै पछिल्लो समय नेपाली फिल्मको कमजोर प्रदर्शन र हलको अवस्थालाई उजागर गरेका छन् । उनले आफ्नो स्ट्याटसमा ‘केटा केटीहरू ‘डेटिङको लागि सुनसान ठाउँ चाहिएको छ ? आजकल..
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर निकेश खड्काले निर्देशन गरिरहेको चलचित्र ‘चपली हाइट ३’ मा अभिनेता अर्पण थापा अनुबन्ध भएका छन् । यतिबेला छायांकनको क्रममा रहेको फिल्म ‘चपली हाइट ३’ मा स्वस्तिमा खड्का, सुपुष्पा भट्ट, महेश गौतम, आमिर गौतम लगायतका कलाकारको शीर्ष भूमिका देख्न सकिनेछ । अर्पणको भूमिका भने खलनायकको भएको उनको गेटअपबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै वर्षको चैत्र २८ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने यो फिल्मलाई..
काठमाडौँ, १५ मङ्सिर चलचित्र 'सम्झना बिर्सना'मा अभिनेत्री छुल्ठीम गुरुङ्गको प्रवेश भएको छ । छायांकन शुरु भइसकेको यस फिल्ममा अभिनेता आकाश श्रेष्ठ र अभिनेत्री पूजा शर्माको मुख्य भूमिका रहेको छ। साथै फिल्ममा छुल्ठिम गुरुङको पनि मुख्य भूमिका रहने निर्माण पक्षले जनाएको छ । आदित्य प्रधान र रेविका प्रधानले निर्माण गरिरहेको फिल्ममा पूजा, आकाश र छुल्ठिमसँगै सुनिल थापा, शिशिर राणा, मेनुका प्रधान, मदन भुजेल..
काठमाडौँ, १० मङ्सिर दुवै चलचित्रले यो वर्षको अन्तिम डेट चैत्र २८ गते शुक्रबार रिलिज मिति जुर्याएपछि अब बक्सअफिसमा ‘चपली हाइट ३’ को ‘प्रेमगीत ३’ सँग भिडन्त हुने भएको छ । आज फिल्मकोे रिलिज मिती घोषणा गदै निर्माता अर्जुन कुमारले उक्त जानकारी दिएका हुन् । उहाँका अनुसार ६ महिना अघि नै फिल्मको रिलिज मिति तोकिएपनि छायाकंनमा ढिलाई भएकाले घोषणा नगरिएको बताए । अब फिल्म..
काठमाडौँ, ८ मङ्सिर चलचित्र निर्माण गर्ने हरेक निर्मातालाई आफ्नो चलचित्रले लगानी उठाओस् भन्ने नै हुन्छ । तर, नेपाली चलचित्रको बक्स अफिस भने केही नाम चलेका ब्यानर र हिट चलचित्रका सिरिजको व्यापारमा टिकेको छ । तिहारपछि काठमाण्डौमा चिसो बढ्दै जाँदा नेपाली चलचित्रको व्यापार भने देशभर नै चिसिएको छ । यस्तो व्यापारले फेरि एकपटक चलचित्र बनाउनेलाई सोच्न वाध्य गराउँछ । उसो त, यो बर्ष नाम..
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर आज शुक्रबारबाट फिल्म ‘च च हुई’ प्रर्दशनमा आएको छ । फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मले एकल प्रदर्शनको अवसर समेत पाएको छ । एकल प्रदर्शनको अवसर पाएपछि निर्माण टिम ‘च च हुई’ ले राम्रो ब्यापार गर्नेमा ढुक्क छन् । रोमान्टिक कमेडी जनरामा निर्माण भएको फिल्मलाई साम्तेन भुटियाले निर्देशन गरेका हुन् । एजीएल इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मको अमृत..
काठमाडौँ, ५ मङ्सिर ‘पोइ र्पयो काले’ को सफलतापछि नायक आकाश श्रेष्ठ र पुजा शर्माको जोडी फिल्म ‘मन परेसी र्पयो र्पयो’ मा दोहोरिने भएको छ । रघु परियारले निर्माण गर्न लागेको फिल्ममा आकाश र पुजासँगै बुद्धि तामाङ, किरण श्रेष्ठ, कालु राना पनि रहेका छन् । पुषको अन्तिम साताबाट छायाकंन सुरु हुने फिल्म फोर्थ आइज् मुभीज प्रालि र डिविआर मिडियाको ब्यानरमा निर्माण हुने निर्देशक..
काठमाडौँ, ३ मङ्सिर नेपाली कथनाक चलचित्र ‘सेल्फी किङ्ग’ पोष्टर सार्वजनिक गर्दै निर्माण पक्षले प्रदर्शन मिति समेत तय गरेको छ । माघ २४ मा प्रदर्शन हुने चलचित्रमा अभिनेता वीपिन कार्कीलाई किङ्ग अवतारमा प्रस्तुत गरिएको छ । नायक विपिन कार्की हरेक चलचित्रमा फरक गेटअपका साथ प्रस्तुत हुन रुचाउँछन् । यसैले पनि उनलाई भर्सटायल कलाकारको रुपमा चिनिन्छ । निर्माणपक्षले सार्वजनिक गरेको पोस्टरमा विपिनलाई मात्र समावेश गरिएको..
Results 546: You are at page 1 of 19